Indlu encinci kwiFama ye-Organic - I-Airbnb
Indlu encinci kwiFama ye-Organic
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguYehuda
Umfazi wam uRita wakha le ndlu incinci kwiminyaka embalwa eyadlulayo, ngothando olukhulu kunye nenkathalo. Yayiyiprojekthi ekhethekileyo kakhulu kuye, kodwa ayisebenzisi kangako kwezi ntsuku: Singathanda ukuba uze uzonwabele!
Indlu encinci ikwifama yethu yeehektare ezili-150 kufutshane neZiko laseHolland, inesauna, iindledlana, imigxobhozo kunye nomlambo kwipropati yethu kunye nokuhamba intaba okuninzi kwindawo ekufutshane.
Le yindawo eyodwa (jonga amanqaku angezantsi), ilungele abantu aba-1 okanye aba-2 (umatrasi omnye ogcweleyo kwi-loft).
Qaphela: Le yindlu ye-RUSTIC. Akukho bhafu okanye ishawa, kwaye akukho sitshixo emnyango. Kukho (ecocekileyo) indlu yomgquba ephantsi kwendlela kunye nendawo yokuqubha ezantsi kwendlela kwiinyanga zasehlotyeni (indawo yokuqubha iseHamilton Creek, nje kwibhulorho eHamilton Rd - siyayithanda ukudipha ngokukhawuleza, kodwa ukuba unexhala malunga nemfihlo isendleleni/kufuphi nezindlu).
Ngaba ikhabhinethi inombane, Amanzi abalekayo ABAMANDLA (ehlotyeni kuphela - siya kubonelela ngejagi enkulu yamanzi ephinda igalelwe ebusika) yokusela nokuhlamba. Kukho iketile yokufudumeza amanzi, ipropane camp-stove yokupheka kunye nefriji encinci. Kukwakho nesitovu senkuni esiza kusetyenziswa kwiinyanga ezibandayo (sisithuba esincinci - ukutshisa ngokulula ukuba umlilo mkhulu kakhulu). Kukho umngxuma womlilo ongaphandle kwindawo ecocekileyo ecaleni kwendlu yetiyi ukuze isetyenziswe ziindwendwe.
Siya kuqinisekisa ukuba kusoloko kukho ikofu kunye neti ekuboneleleni!
4.74 · Izimvo eziyi-144
Kukho iindlela ezi-3 ezintle zokuhamba kwiipropati zeGunya loLondolozo kufutshane nefama yethu (iHalland Centre Trail ikumgama wokuhamba, iTaylor Rd Trail kunye neLily Oaks trail ~5 min drive). Kukho umlambo onokuqubha (Hamilton Creek) ecaleni kweHamilton Rd, umgama omfutshane ukusuka kwifama yethu. Indawo yegesi yaseHolland kunye nevenkile eluncedo kukuhamba imizuzu emi-5, kwaye iindawo zokutyela, iivenkile kunye nethala leencwadi zikude nje ngemizuzu eli-15 eMarkdale. Imizuzu engama-25 emantla sisixeko saseOwen Sound, kunye neelwandle zaseGeorgian Bay
Umbuki zindwendwe ngu- Yehuda
Sisoloko sifumaneka ngeselfowuni, ukuba asikho efama xa ufika.